वर्तमान सरकार र नेपाली काँग्रेसको जारी महासमिति बैठक – Gandaki Media
नेपालको समसामयिक राजनीतिक घटनालाई २ वटा पक्षहरुसँग जोडिएको छ । १) काठमाडौंमा जारी ने.का. महासमिति बैठक र (२) वर्तमान सरकार,
पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेका यी दुई नेपालका मुख्य पार्टी ने. का. र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ने.क.पा. यिनीहरु आ–आफ्नै समस्यामा छन् । वर्तमान सरकार झनै ठूलो दलदलमा फसिरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक र सरकार सञ्चालनका यी २ पक्षहरुमा ठूलो असफलता चुलिदै गइरहेको छ । संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर मिठा भाषण गरेकै भरमा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पछिल्लो समय सरकारको कामकारवाहीले प्रष्ट पारेको छ । जुन
१) संघीयताको प्रयोग ः
संविधान लेख्न भनेर छ वर्षभन्दा बढी समय र खर्ब भन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च ग¥यौ । संविधान पनि घोषणा ग¥र्यौ, संघियताले मुलुकमा ७ वटा प्रदेश ७५३ स्थानीय सरकारको व्यवस्था ग¥र्यो नेपाली जनतालाई भन्यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाराले जनतालाई उत्साहीत जगायो । तर वास्तवमा जनताले संघियताको राज न आज सम्म पाए न हिजो नै स्थानीय निकायमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरुले रिवन काटेर बाहेकको अर्को काम गरेको देखिँदैन, आवश्यकता अनुसारको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । यही अनुरुप सेवा ग्राहीले काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रभावकारी कार्य सम्पादन सरकारी पक्षबाट हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सरकार प्रति जनताको आवेग बढ्दो छ ।
लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता बोकेको मुलुकमा एउटा व्यवसायले गरिखान २२÷२७ थरीका कर तिर्नुपर्ने भएपछि देशमा कसरी उद्यमशीलता फस्टाउँछ ? ऐन ऐलबाट राष्ट्रलाई प्राप्त हुने ६५ अर्व लाभकर मध्ये २४ अर्व लिएर बाँकी ४१, अर्व रकमको लेखाजोखा छैन । उत्पादन मुखि राज्यभन्दा पनि वितरणमुखि राज्य बनेको छ । राष्ट्र प्रमुखको सेवा सुविधाका निम्ति करोडौं लगानी गरी विलासीताका वस्तु खरिद विक्रीमा लगानी गरिएको छ । उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ दिनानुदि बढेको छ । कँही कतैबाट अनुगमन हुँदैन भइहाल्यो भने कारवाही हुँदैन । व्यापारको नाउँमा जति लुटेपनि भएको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्दै, अर्थतन्त्रको इन्जिनको रुपमा रहेको जलस्रोतको प्रयोग गरी प्रशस्तमात्रामा विजुली उत्पादन गरी जनतालाई लिएको करको दर कम गर्ने तिर जानुको सट्टा सरकार जनतालाई थप कर वृद्धि गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुले पनि अहिलेको सरकारप्रति जनगुनासो व्यापक बनेको छ ।
राज्यको स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै, जनताको जिवन स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर मिठा भाषण गर्दै खाली समृद्धिको ढोल बजायौं । देश समृद्धि बन्नका लागि चाहिने श्रम र पुँजीको अधिकतम परिचालन गर्न चुकिराख्यौं । श्रम र उद्यमशीलताको कदर र सम्मान गर्न सधैँ पछि परिराख्यौं । हामीले समृद्धिका लागि किन आफ्नो श्रम, स्रोत, पूँजी परिचालन गर्न सकेनत ? सरकारले समृद्धिका लागि आवश्यक आधारभूत तयारी के गरेको छ । प्रष्ट पार्न सक्नुपथ्र्यो । तर गरेन, अहिलेको अवस्थामा सरकार आफै सम्पन्न बन्नु छ । बाँकी जनता अहिलेको अवस्थामा जनता यति हतास र निरास छन्, कि त्यसको कुनै लेखा जोखा छैन । किनभने देशमा दिन डाहदै हुने बलत्कार, असुरक्षा, वाइडवरी विमान खरीद घोटाला, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मुद्रस्फीति, ३३ किलो सुनकाण्ड प्रकरण, गोविन्द के.सी. को अनसन जस्ता घटनाले अहिलेको सरकार तथा कम्युनिष्टको कानुनी राज्यको अनुभूति जनताले गरिराखेका छन् ।
४) धार्मिक सामाजिक मूल्यः
नेपालमा ८०% हिन्दु हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्ने संविधान सभाको निर्णयलाई नेपाली समुदायले स्वीकार्यका थिए नै, धर्म निरपेक्षताको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको, धर्म सांस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ भन्ने धारा ४ मा उल्लेख गरिएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकार सहआयोजन बनेर देशका प्रधानमन्त्री विभिन्न धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै जानु बढो विडम्बना छ । जिम्मेवार नेता संरक्षक बनेर धार्मिक पुरस्कार थाप्न जानुले सबैलाई लाज मर्दो बनाएको छ । यस्ता गतविधिले गर्दा हाम्रो देशका नेतृत्व पंक्तिको चरित्र र क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरालाई मापन गर्दछ । यस्ता सरकारका गतिविधिहरुले राज्यको धर्म निरपेक्ष मान्यतालाई विवादित बनाई धार्मिक राजनैतिक युद्धको सुरुवात नेपाली समाजमा बन्ने प्रष्ट संकेत छ । नेपालको सदियौंदेखि नेपाली समाजको धार्मिक गतिविधिहरुलाई लत्याएर, परम्परा विरोधी गतिविधि गर्दै सरकार जोडिन पुग्नुले प्रष्ट अहिलेको सरकार सामाजिक, धार्मिक मुल्यमान्यता प्रति गैर जिम्मेवार रहेको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले अहिलेको राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा यी यस्तै सामाजिक हित र जनसरोकार सहित राष्ट्रियताको पक्षमा प्रष्ट दृष्टिकोण बन्न सकेमा बैठक सफल र फलदायी रहने र अहिलेको समयमा नेपाली जनताले बढो चासोको विषयमा हेरिरहेको सन्दर्भमा फेरि पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रुमलिएमा नेपाली उखानअनुसार हात्ती आयो आयो फुस्स रहने कुरामा दुईमत छैन ।